दिपकको फराकिलो मन की अझै प्रचार ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
दिपकको फराकिलो मन की अझै प्रचार ?
फिल्मी फण्डा । फिल्म छक्का पञ्जा चौथौं हप्तामा रिलिज भईरहेको छ । फिल्मले नेपाली फिल्महरुको लाईफटाईम कलेक्शनमा इतिहास रचिसकेको छ । फिल्म हल र वितरकहरुको आधारमा झण्डै ६ करोड सेयर निर्माताको हातमा पर्ने निश्चित देखिएको छ । तर निर्माण टिमले फिल्मले ८ करोड माथि सेयर निर्माताको हातमा पर्ने गरि कारोवार गरिसकेको दावी गरेको छ ।
लक्ष्मी पुजाको भोली पल्ट अर्थात तिहारको तेश्रो दिन छक्का पञ्जाले देशभर जति कमाई गर्छ, त्यसको पूर्ण रकम छक्का पञ्जा लागिरहेको हलहरुको मजदुरहरुलाई वितरण गर्ने दिपक राज गिरीले बताएका छन् । निर्माता तथा अभिनेता दिपकराज गिरीले आफ्नो फेसबुक मार्फत एक दिनको सबै कमाई हलका मजदुरहरुलाई दिने घोषणा गरिएको छ । दिपक राज गिरीले हलको मजदुरलाई समेत सोचेर सो निर्णय लिनु साँचिकै उत्कृष्ट कार्य गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
पक्कै पनि दिपकराज गिरीले आफ्नो फिल्मको प्राविधिकहरुलाई पनि केही न केही गर्ने निश्चित छ । आफुले मात्र कमाऔं भन्ने भावनालाई हटाएर उनले प्राविधिक र मजदुर समक्ष पनि केही साथ पुराउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निकै नै सराहनीय छ । कतै तिहारमा फिल्मको व्यापार अझै बढाउने आशले एक दिनको कमाई मजदुरलाई दिएर थप प्रचार गर्न दिपकले सो बाटो रोजेको त हैन भन्ने अनुमान पनि छ । जे होस् मजदुरहरुले भने एक दिनको कमाई बाँधेर लिन पाउने भएका छन् । यसै कार्यले छक्का पञ्जा केही दिन अझ लम्बिन्छ की, त्यो छक्का पञ्जाको दोश्रो स्वार्थ पनि हुनसक्छ ।